Ao anatin’ny fampiroboroboana ny kolontsaina, indrindra ny rock. Mpitendry 5 no hiatrika nyfamaranana amin’ilay fifaninanana mitendry gitara « Grande-Ile Guitares Talents 2017». Fifaninanana nokarakarain’ilay mpitendry frantsay malaza Marc Demelemester, izay tsy iza fa mpitendrin’i Johnny …Tohiny
Notanterahina tao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany (V7V), Mananjary sy Manakara, ny Rodoben’ny Fisandratana, izay nentina nanamarihana ny fetin’ny vehivavy, tamin’ny herinandro lasa teo. Ny minisitra coach, minisitry ny Fitaterana sy Famantarana ny toetr’andro (MTM), Beboarimisa …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tao Ambatolampikely : Nipotsaka ny atidohan’ilay zazalahy 14 taona
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina namoizan’ain’olona indray tany amin’iny lalam-pirenena faharoa iny ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 04 ora maraina. Zazalahy 14 taona no lasibatra tamin’izany teo Ambatolampikely, fokontany Masombahiny, kaominina Ambohimalaza Miray. Vokatry ny …Tohiny
Andavamamba : Lehilahy nisandoka ho polisy
Niteraka korontana sady nanaitra olona maro teny Andavamamba sy ny manodidina ny savorovoro nentin’ny lehilahy misa roa, izay saofera ny iray tamin’izany raha voalaza fa mpandeha kosa ny lehilahy iray. Ny alakamisy hariva lasa teo …Tohiny